Warar - Faa'iidooyinka dhalooyinka quraaradaha ah sida weel ahaan
Dhalada Beerka Dhalada ah
Caanaha Dhalada ah iyo Dhalada Cabitaanka
Dhalo Saliid saytuun ah
Saliida Dhalada & Khamriga
Milixda Cusbada iyo Basbaaska Shaker
Faa'iidooyinka dhalooyinka quraaradaha ah sida weel ahaan
Dhalada dhalada waa weelka wax lagu duubo ee cuntada iyo sharaabka iyo alaabooyin badan, oo si ballaaran loo isticmaalo. Muraayaddu sidoo kale waa nooc ka mid ah baakadaha taariikhiga ah. Marka la eego noocyada kala duwan ee qalabka baakadaha lagu shubo ee suuqa ku jira, weelka dhalada ah ayaa wali fadhiya meel muhiim ah oo ku jira baakadaha cabitaanka, taas oo aan laga sooci karin astaamaha baakadaha ee aan lagu beddeli karin agabyada kale ee wax lagu karsado.
Maaddaama ay yihiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalooyinka, dhalooyinka iyo gasacadaha waa weelal wax lagu raaco oo caan ah oo caan ah. Tobanaankii sano ee la soo dhaafay, iyada oo la horumarinayo tikniyoolajiyadda warshadaha, waxaa la soo saaray qalab kala duwan oo baakado cusub ah, sida balaastigga, qalabka isku dhafan, warqad gaar ah oo wax lagu duubo, tinplate, aluminium iyo wixii la mid ah. Muraayadda, oo ah nooc ka mid ah waxyaabaha wax lagu rito, ayaa tartan ba'an kula jirta qalabka kale ee wax lagu baakadeeyo. Faa'iidooyinka hufnaanta, xasilloonida kiimikada wanaagsan, qiimaha hooseeya, muuqaalka quruxda badan, soosaarka fudud iyo dib-u-warshadaynta, dhalooyinka dhalada iyo gasacadaha ayaa wali leh astaamo aan lagu beddeli karin agabyada kale ee wax lagu rido inkasta oo ay ku tartamayaan qalabyada kale ee baakadaha. Weelka baakadaha dhalada ah waa nooc ka mid ah weel daahfuran oo ka samaysan muraayad dhalaal iyadoo la afuufayo oo la shubay.
Qiyaasta dib-u-warshadaynta ee dhalooyinka quraaradaha ahi way sii kordhayaan sannad kasta, laakiin tirada dib-u-warshadayntu waa mid aad u ballaadhan oo aan la qiyaasi karin. Sida laga soo xigtay Ururka Baakadaha Dhalada: Tamarta ku keydsan dib-u-warshadaynta dhalada dhalada ah waxay ka dhigi kartaa nalka 100-watt nalka illaa 4 saacadood, wuxuu socodsiin karaa kombuyuutar 30 daqiiqo, wuxuuna daawan karaa 20 daqiiqo barnaamijyada TV-ga. Sidaa darteed, muraayadaha dib-u-warshadaynta waa arrin muhiimad weyn leh. Dib-u-warshadaynta dhalada muraayadaha ahi waxay keydisaa tamarta waxayna yareyneysaa awoodda qashinka qashin-qubka, taas oo siin karta waxyaabo badan oo ceeriin ah oo loogu talagalay alaabooyinka kale, oo ay ku jiraan dhalooyinka dhalada dabcan. Sida ku xusan Warbixinta Dhalada Qaranka ee Macaamiisha Caaga ah ee Golaha Wax soo Saarka Kiimikada ee Mareykanka, qiyaastii 2.5 bilyan oo rodol oo dhalooyin caag ah ayaa dib loo warshadeeyay sanadkii 2009, iyadoo heerka dib u warshadaynta uu yahay kaliya 28%. Dib-u-warshadaynta dhalooyinka quraaradaha ahi waa wax fudud oo faa'iido leh, iyada oo la jaan-qaadaysa istiraatiijiyado horumarineed oo waara, waxay badbaadin kartaa tamarta waxayna ilaalin kartaa kheyraadka dabiiciga ah.
Falanqaynta suuqa ee dhalooyinka quraaradaha ah
Rajada horumarinta ee biirka dhalada iyo wi ...